La kulan: Ninka 40 sano ku bixiyay nooleynta Keymaha la xaalufiyay! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / La kulan: Ninka 40 sano ku bixiyay nooleynta Keymaha la xaalufiyay!
Posted by: radio himilo June 5, 2017
Muqdisho – 83 sano jir lagu magacaabo Antonio Vicente wuxuu 40-kii sano ee lasoo dhaafay uu ku howlnaa dib u tarminta keymaha deegaanka. Sida badan oo xoola-dhaqatada Brazil ay u jaraan geedaha si ay xeyn-daab uga dhigaan xerooyinka iyo inay guryo ku dhistaan, wuxuu u hal-gamay in taranta geedaha la dabar-jaro uu soo nooleeyo.
Next: Dhageyso: Barnaamijka Martida Ramadaanka 05 06 17